जाँदाजाँदै मिश्रको अर्को फैसला, क्यासिनो माजोङलाई दायित्वबाट उन्मुक्ति ? « GDP Nepal
जाँदाजाँदै मिश्रको अर्को फैसला, क्यासिनो माजोङलाई दायित्वबाट उन्मुक्ति ?
Published On : 26 December, 2018 12:10 pm
काठमाडौं । सोल्टी होटलमा सञ्चालित विवादास्पद क्यासिनो माजोङले पुराना कर्मचारीको दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने सम्भावना बढेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रसहित न्यायाधीशद्वय केदारप्रसाद चालिसे र बमकुमार श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले यसअघि संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला उल्ट्याएसँगै यस्तो सम्भावना देखिएको हो ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन क्यासिनो नेपालका मजदुरको दायित्व मोजोङले तिर्नुपर्ने श्रम कार्यालयको निर्णयलाई सदर गरे पनि पूर्ण इजलासले मंगलबार फैसला उल्ट्याएको छ ।
यससँगै माजोङ क्यासिनोले तत्कालीन क्यासिनो नेपालका कर्मचारीको दायित्व बहन नगर्ने आफ्नो जिकिर बलियो बनेको छ । तर, उसले अझै अदालतबाट यस्तो आदेश भने पाइसकेको छैन ।
हदम्याद गुज्रेका कारण श्रम कार्यालयले माजोङको विपक्षमा गरेको फैसला सदर गर्ने सर्वोच्चको आदेशमा पुनरावेदन गर्न क्यासिनो माजोङलाई बाटो खुलेको छ । क्यासिनो नेपालमा कार्यरत ४९ मजदुरले आफूले काम गरेको पारिश्रमिक, तलबभत्ताको माग गर्दै दायर गरेको रिटमा उनीहरूको बक्यौताको दायित्व सो कम्पनी सकारेको क्यासिनो माजोङले लिनुपर्ने श्रम कार्यालय बागमतीको आदेश थियो ।
यसविरुद्ध माजोङले पुरानो कम्पनीको बक्यौता तिर्ने आफ्नो दायित्व नरहेको भन्दै निर्णय बदर गर्न श्रम कार्यालयमा माग गरेको थियो । तर, श्रम कार्यालयमा ३५ दिनभित्र पुनरावेदन गर्नुपर्ने भएपनि हदम्याद गुज्रेपछि परेको कम्पनीको पुनरावेदन खारेज भएको थियो ।
सोही मुद्दामा ०७३ साउन १८ गते सर्वोच्चले हदम्याद गुज्रेपछि परेको पुनरावेदन खारेज गर्ने श्रम कार्यालयको निर्णयलाई सदर गरेको थियो । न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले सदर गरेको हो ।
मंसिर २७ गते बहस सकिएपछि मंगलबार पूर्ण इजलाशले यसअघिको आदेश उल्टी भएको आदेश गरेको छ ।